शाहिद अफ्रिदी सुधार्न चाहन्छन् भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध: उठाउदैछन् यस्तो ठूलो कदम
पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदीले भारतीय किर्केट टोलीका खेलाडीहरुलाई पनि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) टी20 किर्केटमा खेल्नको लागि बोलाउनु पर्ने बताएका छन्।
लाहोरमा आफ्नो फ़ोउण्डेशनले गरेको एक कार्यक्रममा कुरा गर्दै अफ्रिदीले भने, ‘ मलाई थाहा छ, भारतीय किर्केटरहरुलाई विदेशी टी२० लिग खेल्न अनुमती छैन। तर, पनि उनीहरुलाई पिपिएल मा निमन्त्रणा गर्ने कोशिश भने सक्छौं। मलाई यो पनि थाहा छ की, भारतीय खेलाडीहरु इन्डियन प्रिमियर लिग मात्र खेल्छन्। यद्यपी, उनीहरुलाई पिपिएलमा खेल्नको लागि बोलाउने चाहिँ छौं नै। ‘
पाकिस्तानका पूर्व स्टाइलिश अलराउण्डर अफ्रिदीले यो कुरा सन् २००८ मा गरेका थिए। जतिबेला भारतीय किर्केट टोली र पाकिस्तानबीच कुनै पनि द्विपक्षीय सीरीज भएको थिएन। यस बाहेक अफ्रिदीले पाकिस्तान किर्केट टोलीले सं २००८ पछि पुन: भारतसँग किर्केट खेल्न थालेपछि उक्त कुरा सकारात्मक रहेको भन्दै खुसि व्यक्त गरेका थिए।
उनले पाकिस्तानी किर्केट बोर्डलाई पनि सल्लाह दिंदै देशमा एकदिवसीय खेलको पनि आयोजना गर्न सुझाएका थिए। पाकिस्तानमा अहिले सम्म खेलिएका अन्तराष्ट्रिय किर्केट म्याचहरु सबै टी20 फर्मेटमा मात्र भएका छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, चैत ०९, २०७४१४:२२
यी खेलाडी परे फिफा वर्षको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी मनोनयनमा ! नेयमार भने मनोनयनबाट टाढा !
मेस्सी र रोनाल्डोबीचको प्रतिस्पर्धा समाप्त
विश्वकपको अन्तिम १६ मा छनोट भएपछि अर्जेन्टिनी कप्तान मेस्सीले के भने ?